Maleeshiyada ISIS oo sheegatay masuuliyada dilka labo askari oo ka dhacay Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaleeshiyada ISIS oo sheegatay masuuliyada dilka labo askari oo ka dhacay Boosaaso
February 5, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay masuuliyada dilka labo askari oo katirsanaa ciidanka booliiska Puntland, sida ay tabisay warbaahinta Acmaaq oo ku hadasha afka ISIS.
Dilka ayaa ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso Talaadadii, iyadoo kooxda dilka geysatay oo ku hubaysnaa baastoolado ay ka baxsadeen goobta, sida goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta.
Dilkan ayaa noqonaya kii saddexaad oo kooxda argagixisada ah ay ka fuliso gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland tan iyo bishii Janaayo, sida uu muujinayo xog uu uruuriyay bog wareedka Puntland Mirror.
Dabayaaqadii bishii Janaayo, Jaamac Maxamed Khuurshe, guddoomiyihii hore ee degmada Qandala, ayaa waxaa toogasho ku dilay niman baastoolado ku hubeysan gudaha magaalada Boosaaso, waxaana masuuliyada weerarkaas sheegatay ISIS.
Garabka Daacish ee Puntland ku sugan, taasoo asaasmatay bishii Oktoobar ee sanadkii 2015, ayaa waxaa hoggaamiya Cabdulqaadir Muumin, oo horey u ahaa sargaal Al-Shabaab ah. Waaxda Difaaca Mareykanka ayaa ku dartay Muumin liiska argagixisada adduunka. Ku xigeenkiisii Cabdixakiin Dhuqub ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku geystay bishii April 2019.
Maleeshiyada oo loo maleynayo in ay haysato ku dhawaad 100 dagaalyahan, ayaa saddexdii sanno ee u dambeysay sheegatay masuuliyada ficilo argagixiso oo ay kamidyihiin dilal iyo qaraxyo oo badankood ka dhacay gudaha Boosaaso, ee xarunta ganacsiga Puntland.
June 6, 2019 Lix dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada ISIS oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Puntland
April 14, 2019 Puntland oo sheegtay in ku xigeenkii Cabdulqaadir Muumin lagu dilay duqeyn
Cabdiraxmaan Bayle: Doorashada madaxweynuhu waxay u dhici doontaa si xalaal ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guuddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay si xalaal ah u dhici doonto. “Murashixiintu waxa ay hor imaanayaan meel cadaan ah, xildhibaanada [...]